Android SDK maahan Software bilaash ah | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Noticias, Barnaamijka
Kaliya waxaan dhigayaa maqaal muujinaya horumarka Android, aan dhahno maqaal pro ama u hiilinta Android, si kastaba ha noqotee ... tani ma noqon doonto _¬
Si aad u isticmaasho softiweer waa inaad ku raacdaa liisanka, shuruudaha iyo shuruudaha isticmaalka ... si fiican, aan u aqrino shuruudaha ama shuruudaha isticmaalka Android SDK:
3.3 Uma isticmaali kartid SDK ujeeddo kasta oo aan si cad u oggolaanayn Heshiiskan Shatiga. Marka laga reebo inta ay u baahan tahay ruqsadaha saddexaad ee khuseeya, waxaa laga yaabaa inaadan: (ilaa) nuqul (marka laga reebo ujeedooyinka keydka), isbeddel, la qabsadaan, dib u qaybin, kala daadasho, injineer gadaal, demisnimo, ama Abuur shaqooyin deris ah ee SDK ama qayb kasta oo SDK ah; ama (b) ku dheji qayb ka mid ah SDK taleefanka gacanta ama qalab kasta oo qalab kale ah marka laga reebo kombiyuutarka shakhsi ahaaneed, isku dar qayb kasta oo SDK ah iyo barnaamijyo kale, ama u qaybi wixii barnaamij ama qalab ah oo ku jira qayb ka mid ah SDK.
Taas oo lagu sharaxay qaab fudud waxay noqon doontaa:
Ma sameyn kartid nuqulo SDK ah (marka laga reebo haddii ay tahay keyd kuu gaar ah adigu), ma beddeli kartid ama la qabsan kartid baahiyahaaga, dib uma baahin kartid, gadaal kama dhigi kartid injineerka, ma kala saari kartid ama ma qeybin kartid, mana abuuri kartid waxyaabo kale (fargeetooyin I qaado) SDK ama qaybo ka mid ah.
Kaliya 3 xaraf ... - » WTF
Nasiib wanaag ayaa jira Replicant For Fargeeto ka mid ah Android SDK oo la sameeyay ka hor intaan xeerarkan ama xayiraadaha cusubi jirin. (bogga Nuqul SDK)
Tani shaki la'aan, inkasta oo aanan ahayn horumariye Android si kasta ha noqotee ... way i xanuunaysaa wayna i dhibaysaa, si fiican ... _¬ … Miyay tahay inaan la oggolaado kuwa aflagaadeeya Android oo madaxayga hoos u dhigo dhaleeceyntooda?
Google, waxaad si rasmi ah u tahay shirkada # 3 ee aduunka ugu neceb….
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Android SDK maahan Software Bilaash ah
Runtii dadku wali ma aaminsan yihiin halkudhigga "shar ha noqon" ee Google? Android waa barnaamij furan oo furan, marna ma aysan taageerin mabaadi'da falsafadda Software-ka Bilaashka ah, waa wax laga xishoodo xaqiiqda, kaliya messiah wuxuu noqon lahaa FirefoxOS oo ku shaqeeya barnaamijyada HTML5, Dalvik waa madax xanuun.
DalvikVM ma noqon karo qarax, laakiin waxay jirtay qiyaastii 3-5 sano waxayna keentay Android halka ay joogto. Ma dhahayo HTML5 awood maleh, hadii ay sameyso, waa la arki doonaa hadii markii lagu dabaqo nooc hooseeya la heli karo dadweynaha waxay u shaqeysaa sida ugu wanaagsan ee ay u muuqato.
Waxaan u maleynayaa in WebGL (OpenGL) ay awoodi doonto inay siiso isla xawaaraha garaafka sida nadiifka ah OpenGL asal ahaan, iyo in waqtiga Firefox OS soo baxo, dhammaan API-yada ugu yar ay diyaar u yihiin howlgalka saxda ah iyo isticmaalka Qalabka. Taasi waa, kamaradaha, makarafoonada, samaacadaha dibadda.
Waxay noqon doontaa adduunyo suurtagal ah, waxaan rajeynayaa inaysan niyad jabin 😛
Naxdin ... waligey ma aanan helin taleefan casri ah laakiin waxaan maskaxda ku hayaa android oo aan arkaa dhaqamadan ...
Aad ayey u xun tahay, haddii aysan saxin oo Tizen ay si fiican u shaqeyso, waa inaan bedelnaa ...
Waxaad u dhigaysaa sida oohh waa maxay tan !!
Waxaan idin xasuusinayaa in warkan uu yahay laga bilaabo Nofeembar 20 ama wax lamid ah aduunkana wali lama burburin, sidoo kale saamiga suuqa kuma dhicin, waxaan u maleynayaa inuu xitaa kor u kacay.
Ka sokow, maxaa ku wanaagsan Tizen? Maxaa ka dambeeya Samsung? Inta aan ogahay, Samsung terminal-ka waa qashin waxaanan leeyahay waxaan ku haystaa Qoraalkeyga, Xusuusin II, iyo labo S3s gurigayga, dhammaantood qof walba wuu adeegsanayaa, si fududna dhibaatooyinka S3 iyo sida xun ee ay u cusbooneysiiyaan Waxaan haystaa maqal igu filan.
In barnaamijkaagu la socdo HTML5? Hmm, taasi waa, tarjumaadda waxaa loo daayey makiinadaha biraawsarka mareegaha, sax? Tani uma shaqeynayso ciyaaraha 3D, iyada oo aan la xusin in faahfaahinta kama dambaysta ah ee HTML5 aysan soo bixin, iyo in android sidoo kale lagu qorsheyn karo HTML5.
Waxay u dhigeen tan goor dhow waana sababta oo ah shirkadaha qaatay qalabka Google SDK ee sameeya waxyaabaha ay ka dhasheen waxay bilaabeen inay sii kordhaan, jajabyada xitaa haddii ay suurtagal tahay noocyada android, SDK-na waa shaqo ay qabteen. mamnuuco kala qaybinta baakadka ama si xun u isticmaalka, dhamaadka maalinta waxaan kaliya ka hadlaynaa SDK, ma ahan android ama wax la mid ah.
Tusaalaha tan waxaan ku leenahay Kindle, oo adeegsanaya nooc wax laga beddelay oo ah android, kaas oo horey u jajabiyay noocyada wax badan isla markaana ka dhigaya barnaamijyayaashu inay tixgeliyaan qalab kale, sida haddii aysan ku filneyn.
Waxaan ku haynaa tusaale kale noocyada Shiinaha, sida MIUI iyo qaar kale oo wax ka beddelaya SDK si ay u bartaan noocyadooda.
Waxa ay tahay inay ku guuleystaan ​​sannadkan waa inay baabi'iyaan dhammaan kala-jajabnaanta suurtagalka ah, haddii barnaamijyadaada ku jira Android waa inaad tixgelisaa 2 ama 3 nooc oo boosteejooyin ah, ma ahan 400 wax sida ay hadda tahay u dhaca. Haddii aysan helin tan inta lagu jiro sannadkan, waxaan aad uga baqayaa in Ubuntu taleefannada ay bilaabaan inay cunaan dhulka, sababtoo ah sida ay u barteen waa wax aad u wanaagsan oo barnaamijyada C-ga waxaad ka heleysaa waxqabad badan marka lagu daro in ay yiraahdeen way fududaan laheyd in barnaamijyada android loo gudbiyo Ubuntu
Maxaad u malaynaysaa?. Tani waa waxa dhacaya marka wax loo dhammeeyo lacag.Google waa shirkad weyn tallaabada ugu yar ee ay qaaddana waxaa loola jeedaa isla wax: Lacag kasbasho sida ugu wanaagsan uguna fudud uguna dhaqsa badan uguna macquulsan, heh, heh.
Taasi haddii aanan xumaan waxaa sameeyay shirkad Shiineys ah oo iibinaysay aalado leh fargeeto android oo keliya laga aqbalo barnaamijyada shirkaddaas, laakiin dhibaatada lafteeda ayaa ahayd in shirkadaha kale (gaar ahaan Asus, haddii aanan xumaan) doonaynin sidoo kale samee Dhamaadka waxaan u maleynayaa in kaliya lagu dabaqay shirkadaha ka dhex jiray la-hawlgalayaasha Google. Waan hubaa in wax sidaas oo kale ah ay ahaayeen laakiin haddii aan qaldanahay in la i saxo: D.
Oo go ... Miyuu sidoo kale khuseyn doonaa «Qalabka Madalweynaha»? Sababtoo ah kuwa qalabka khaladka ka dhigaya madal waxaa ku jira barnaamijyo gaar ah oo xidid ah, rakibida soo kabashada, iwm
Hadday sidaas tahay, qashinka saddexaad ee weyn. Isticmaalaha tooska ah ee SDK wax dhibaato ah kuma jiri doono.
Waan ogaa nuqul, in kasta oo wax fikrad ah aysan ka haysan SDK. Si kastaba ha noqotee, "foorjo" SDK, oo loo maleynayo inaan xor laga sii ahaan doonin, miyaanay jebin doonin sharcigaas? "Miyaa la mamnuucay in la nuqulo / wax laga beddelo mid ama in ka badan qaybaha SDK"?
Weli waxaan qorsheynayaa inaan sii wado isticmaalka SDK-ga hadda jira. Farqiga ayaa noqon doona in qalabka asalka ah ee Devs (iwm ...) uu na weydiin doono inaan rakibno SDk buuxa halkii lagu dari lahaa qaybo yar oo ka mid ah ADB (Buugga Android Debugging Bridge, ama Buugga Android Debugging).
Maalin kasta waxaan u arkaa mustaqbal dheeraad ah Firefox OS ama Ubuntu Phone OS, ugu yaraan aniga ahaan 😀
Maaddaama aynaan dammaanad ka qaadin in Ubuntu Telefoonka OS uusan sidan ku dhammaan doonin (kaalay, waxay u badan tahay), waxaan ku sharxi lahaa Firefox OS (oo sidoo kale u baahan ilaha yar, dib u soo nooleyn kara waxyaabaha).
haddii kaniisaddu isticmaasho gpl waxaan u maleynayaa inaysan taasi sameyn karin.
Laakiin u fiirso, ELAV, siday erayadaydu u sii sheegeen! Google waa Microsoft-da cusub!
+1. Waxaan ku qamaami lahaa Ubuntu Telefoon, badanaa iswaafajinta nidaamyadeyda kale. Anigana sidaan fahmay Canonical waxay kusii wadi doontaa siyaasadooda caadiga ah ee gpl.
Waxaan dareemayaa inaad buunbuunineyso warka. Waxaan ka hadleynaa Android SDK, maahan Android. Oo ma jiraa qof ayaa horay u sheegay inuu ka fekerayo waxyaabo kale? Muxuu yahay SDK !! Android weli waa isku mid. Iyagu ma bixin doonaan inay lacag bixiyaan, mana gubayo shaashaddaada markaad isticmaaleyso, mana ahan inay dilaan carruurta Afrika. SDK wuxuu si fudud u joojin doonaa xor ahaanta. Waa sidee xumaanta, iyadoo la ogyahay wax kasta oo Google noogu deeqo si xor ah?
Google waxay bixisaa adeegyo badan oo bilaash ah KELIYA OO KELIYA maxaa yeelay waxay kuu keenayaan malaayiin faa iidooyin dhaqaale (akhri: dacaayad, suuqgeyn, iidheh, iwm) oo aan cidina aaminsanayn in Google yahay Laanqayrta Cas, ama Greenpeace ama wax la mid ah!
Haa, waa run, waa kaliya SDK Android ah, wax intaa dhaafsiisan ... laakiin qaarkeen ma dareemayo gabi ahaanba raaxo ama nasasho marka laga mamnuuco inaan wax u isticmaalno qaab gaar ah ama mid gaar ah, taasi waa ... laguu sheego: «tan qaado, laakiin ma wadaagi kartid, la qabsan kartid ama nuqul ka samaysan kartid“On Kaalay, wax fiican maahan, maahee?
Laakiin @Tanrax SDK WAA waxa noo daneynaya horumar ahaan, la'aanteed bilaash ma jiri doono roms wax laga beddelay, mar dambe miui, cyanogen dambe, iwm ... baashaalkii wuu dhammaaday.
Kuma horumariyo android maxaa yeelay ma jecli API-ga iyo java waxay dhigi karaan nabarro badan inta ay doonaan, taas oo wali aad u kacsan. Waxaan rajadayda ka qabay meego iyo qt, ñiff, theiff ... laakiin wiilka madlito ee weyn ... elop Trojan ayaa ku kharibay Nokia, waxaan rajaynayaa in Tizen oo badalay uusan dhiman waqtigiisii, waqtigaas oo dhamaan OEMsku dhaheen Waxay isticmaali lahaayeen meego iyo dhamaadka pum.
Wax yar sug. Sidee maya ROMs? ROM-yada waxay ku saleysan yihiin koodhka isha ee Android, ma ahan SDK (illaa ay yihiin kuwa ROM-yada horudhaca ah ee ay u sameeyaan caddeyn ahaan fikradda, oo ku saleysan sawirada Android ee SDK).
Sikastaba xaalku ha ahaadee, SDK waxaa adeegsada Cyanogen iyo shirkad si ay u khaladiyaan ROM-ka, uma baahna inay wax ka beddelaan gabi ahaanba. Kaliya, tusaale ahaan, dhinacyada saddexaad mar dambe ma awoodi doonaan inay si bilaash ah ugu isticmaalaan SDK qalabkooda, tusaale ahaan, barnaamij lagu xidido kaniiniga.
Kale oo aan ahayn, dhammaan Dhib malahan.
Sax, raalli ahow paranoia waa in warka cabsi gelinayo.
By the way @Kzkg qoraal Qt5 ah oo soo baxay hadda !!! http://qt-project.org/qt5
La igama cusboonaysiin qoraalkii ugu dambeeyay bilihii la soo dhaafay . - ^ U
Waa hagaag, mar dambe maahan barnaamij bilaash ah, iyo? Waxay xaq u leeyihiin inay ku sameeyaan waxa ay doonayaan softiweerka ay soo saaraan, waxay lahaan lahaayeen sababahooda wanaagsan.
Iska jir ninyahow, faallooyinka noocaas ah halkan waa lagaa mamnuuci karaa ... LoL
Nah 😀… haba yaraatee, haa, markaan daabacay warka waxaan diyaar u ahaa inaan sharad ku dhigo gurigayga inaad dhowr faallooyin halkan kaga tagi doonto LOL !!
Uma galo inaan qiimeeyo warka laakiin boggaga qaar ayaa beeniya inay sidaas tahay. Xigasho: http://www.zdnet.com/no-google-is-not-making-the-android-sdk-proprietary-whats-the-fuss-about-7000009406/
Waad ku mahadsantahay iskuxirka, waan furey oo waan aqriyay waxa ku saabsan, sikastaba dareenkeygu hayaa ... maxaa yeelay marka la eego isticmaalka SDK iyaguna waxay dhigayaan shuruudaha ama xaddidaadaha, waxaan uga tagay xiriiriyaha boostada.
Sikastaba, mahadsanid 🙂
sida laga soo xigtay zdnet: waxa "lahaansho" ah waa ikhtiyaari SDK ah, ilaha waxaa shati ka haysta liisanka Apache 2.0.
Sikastaba, waa inaad isticmaashaa barnaamij lahaansho si aad uhesho ilihiisa, dhib malahan….
Si loo horumariyo taleefanka ubuntu markaa.
Nacayb weligiis ah oo casriga casriga ah!
Weligay kuma jeclaan Android inaan noqdo JAVA oo leh magac wacan. In kasta oo ay run tahay in badeecada dhammaadkeedu wanaagsan yahay, xaqiiqda ah inay tahay Java weli qodax ayey ku jirtaa hoosta cagta.
Ma arko waqtiga Ubuntu Telefoonku soo muuqanayo (haddii ay run tahay inuu noqon doono fargeeto ah GNU / Linux saafi ah) ama taleefan kasta oo kale oo bixiya fursado isku mid ah (ama ka weyn, ka sii fiican!) Laakiin wixii intaas ka sarreeya oo aan ahayn Java.
Iima yaabin, waa ka sii badan tahay ... Layaabi maayo haddii Google ay ku celceliso alaabooyin badan oo kale, sida Chromium
Yar yar waxay noqon doonaan kuwo jilicsan oo bilaash ah madaama ay xukumaan suuqyada
U adeegso softiweer bilaash ah qalab si aad uga adkaato tartanka ka dibna aad iskaga tagto
Ku soo dhowow shuuciyadda, waan ku adeegsaneynaa, waan ku khiyaanaynay, waxaanna uga faa'iideysan doonnaa dhammaan fikradahaaga xagga shatiyadayada
Tani waa wax walba oo ku saabsan. Waan u hogaansamayaa hadalkaaga, Rainbow_fly.
Mararka qaar waxaan la yaabaa, dhamaanteen oo dhaleeceeya noocan oo kale ah (aniga ayaa ku jira) miyaanay sidan oo kale yeeli doonin haddii aan fursad u yeelan lahayn inaan bilowno shirkad sida Google oo kale ah si aan macaash uga helno? Taas ayaa sidoo kale igu hogaamineysa su'aal kale, Canonical ma sameyn doonto isla markii Ubuntu Telefoonka suuqa ku dhacay, ka dib markii ay maalgashatay Ubuntu oo dhan? Hmm ... sida ay u murugsan tahay tan ayaa soo socota.
Waxay kuxirantahay dhamaan rukhsadaha ay isticmaalaan. Haddii ay adeegsadaan GNU GPL ma awoodi doonaan.
Waxaan had iyo jeer la yaabi jiray si isku mid ah dakhliga. Waxaan u maleynayaa inaan sidoo kale ...
Mmmm ma aqaan. google waa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka, ma u baahan tahay faaiido badan?
Xorriyadda barnaamijka, si wanaagsan dhammaanteen waan ognahay waxa halkan ku soo qulqulaya, ka gudubku waa lacag. Sababtaas oo kale, iswaafajintan “haddaan shirkad yeelan lahaa waan xidhi lahaa koodhka” kuma qancinayo.
* wuxuu dhaafiyaa arinta lacagta.
Waxaan u maleynayaa inaad sax tahay, waan dhaleeceyneynaa sababtoo ah isku xaalad kuma nihin. Uma maleynayo in Microsoft, Apple ama Google ay xun yihiin, waxa dhacaya waa inaysan ahayn shirkado samafal, waxay rabaan faa'iido, muddo. Taageeraha Apple ayaa iibsada tufaaxa amniga, iyada oo aan loo eegin qiimaha sare oo uu ku dhaleeceeyo Linux wax walba. Kuwa Microsoft ee qaddarka badan ee ciyaarta iyo sababtoo ah Win8 waxaan u maleynayaa inay wax fiican sameeyeen. Iyo google sifiican, google maalin un baa na kufsanaya oo xitaa ma ogaan doonno.
Laakiin wali waxaan u maleynayaa in shirkadaha ay tahay inay lacag sameystaan, oo aysan aheyn wax kale. Kumaa mararka qaarkood ku xadgudba isticmaalaha? Haa. Laakiin way jirtaa.
Marka laga reebo demos, Canonical miyuu sawiray ama ma dhajiyay lambarka isha? Waa shaki. Qaabkaas ayaan ku bilaabi karnaa su'aalaha Ubuntu Telefoon.
Marka laga hadlayo qodobka kale, haddii aan shirkad furo, waxaan sii deyn lahaa GPL hoostiisa. Shaqadayda waa laga ilaaliyaa inay diyaar u ahaato inay furayso koodhka waxaanan ka faaiidaysan karaa shaqaalaha tirada badan ee dadku miiska keenaan entretenimiento, haddii aan u wici karno taas.
Waxaad ku sameyn kartaa tartan abaalmarin lacageed qof inuu yimaado oo ku siiyo muuqaalkaaga aad rabto GPL hoostiisa oo aadan siinin mushahar.
Eeg, adoo ka tagaya macaashka, oo sharci ahaan u ah ganacsi kasta; Ma jiraa qof waligii isweydiiyey intee in le'eg dhammaan adeegyada ay bixiso Google waxay ku kacaysaa lacag la’aan?
Dhanka kale, beddelka liisanka wuxuu ka yimid SDK, oo aqlabiyaddiisu aysan isticmaalin haba yaraatee qayb wanaagsanna aysan wax fikrad ah ka haysan waxa ay tahay, sida faallooyin badani muujinayaan. In dhaleeceynta Google ee tan ay tahay mid sax ah, waa hagaag, laakiin uma baahnid inaad duufaan ka dhigto koob biyo ah.
Tani waxay iga dhigeysaa inaan doonayo inaan ku wareero Ubuntu Telefoon badan.
Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo qof kasta oo garanaya waxa iska beddelay adeegsiga SDK?
Sannadkii 2009, dhibic 3.3 horey ayey u jirtay: http://web.archive.org/web/20100111025451/http://developer.android.com/intl/ja/sdk/terms.html
3.3 Marka laga reebo inta ay u baahan yihiin ruqsadaha saddexaad ee khuseeya, ma nuqulan kartid (marka laga reebo ujeeddooyin keyd ah), wax ka beddeli karto, la qabsan karin, dib u sii baahin karin, u kala bixin karo, injineerka gadaal ka soo riixaya, kala-sooca, ama abuuri karin shaqooyin ka soo jeeda SDK ama qayb ka mid ah SDK. Marka laga reebo inta ay u baahan tahay ruqsadaha saddexaad ee khuseeya, ma buuxin kartid qayb ka mid ah SDK taleefanka gacanta ama qalab kale oo qalab ah marka laga reebo kombiyuutar shaqsiyeed, iskudir qayb kasta oo SDK ah iyo barnaamijyo kale, ama ha u qaybin wax barnaamij ama qalab ku darista qayb ka mid ah SDK.
Waxaan su'aasha ku weydiin doonaa si ka duwan sidii hore si aan u arko haddii uu qof ii jawaabo.
Nasiib darro xiritaanka Android laakiin, waxay ahayd in laga filo in la siiyay in shirkadaha waaweyn ee kombuyuutarrada ay ilaaliyaan mahadnaq aad u badan!
Aan aragno sida Samsung ay ugu sameyso Tizen ama Firefox OS.
Iyo muxuu yahay SDK sideese ii saameynayaa anigoo ah milkiilaha terminaalka android?
SDK waxay u taagan tahay Qalabka Horumarinta Software-ka, aaladaha lagu horumariyo barnaamijyada asal ahaan wax saameyn ah kuma lahan adiga oo isticmaale ahaan keliya haddii aad tahay horumariye illaa iyo, maadaama aysan hadda ahayn software bilaash ah, waxaa jira xaddidaadyo gaar ah oo ku saabsan waxa aad sameyn karto ama aadan sameyn karin.
Ku jawaab Da3mon
Ku jawaab ivonne
chinazo aad u awood badan dijo
Mana daneeyo, waxaan haystaa spforkIO-kayga. Amarkan ka hor.
Ku soo jawaab chinazo aad u awood badan